IINGCINGA ZETRAVERINE SHOWER (UYILO LWEGUMBI LOKUHLAMBELA) - UYILO LWEGUMBI LOKUHLAMBELA
Eyona uyilo Lwegumbi Lokuhlambela Iingcinga zeTraverine Shower (Uyilo lwegumbi lokuhlambela)
Iingcinga zeTraverine Shower (Uyilo lwegumbi lokuhlambela)
Eli galari libonisa iingcinga zeshawari yokuhamba ngengqondo kwindawo yokuhlambela enobunono obubanzi, ukuhonjiswa okuphezulu kunye nokugqitywa. Ngamathoni e-tan, amhlophe, ukhilimu, obomdaka kunye nobomvu, i-travertine tile ivela kwiindlela ezahlukeneyo. I-limestone yendalo ijongeka intle kwaye ngokuqinisekileyo inokubonelela ngemvakalelo yokunethezeka okupheleleyo kwindawo yakho yangasese. Apha ngezantsi uyakufumana uyilo lwegumbi lokuhlambela kunye ne-travertine ukwenza eyakho i-spa efanelekileyo njengokubuya.
Kumfanekiso ongentla apha ishawa ebutofotofo ukhetha iithayile zamatye ezibanzi ezibekwa kumgangatho wayo, onika ingqwalaselo kwisitayile setreyini esityebileyo esifaka iindonga zeshawari. Iindidi ezincinci zokuluka ibhasikidi zisetyenziselwa umgangatho wokuhlamba, zinika umgangatho ongashukumiyo. Eminye yale ndawo yokuhlambela ye-master master ifaka umbala okhanyayo okhanyayo kwiipaneli zayo eziphakanyisiweyo kunye ne-travertine slab egudileyo yee-countertops zayo. Isibuko esikhulu kwigumbi lokuhlambela lenziwe sisitayile seClassic esakhelweyo kwi-architrave emhlophe ecocekileyo.
Esinye sezona zigqibeleleyo kwiindawo zokuhlambela ngamatye, kungekuphela ngenxa yeenkozo ezintle kunye namatye anqabileyo anokungena, kodwa ikwaye ibe yindawo elungileyo engatyibilikiyo xa idutyulwa, i-matte okanye ityholwe ehlathini. Enye yezona ndawo zibonakala ngokulula zamatye endalo yitravertine eyakhiwe kwilitye lekalika lendalo.
Ukuza kwiindidi zemibala ukusuka kumhlophe, beige, golide, brown, bomvu, ngwevu, kunye nakwithoni ephantse ibe luhlaza, i-travertine ikwaxabiseka kakhulu kwi-patina eyifumanayo njengokuba indala. Oku kunika i-travertine uphawu olukhethekileyo lokuba ngcono njengoko ineminyaka, ngokuchaseneyo nolunye uhlobo lwamatye endalo enxibe obhityileyo okanye umbala wayo wendalo uphela lixesha.
Kuxhomekeka kwindawo, i-travertine inokuba yenye yexabiso eliphantsi kwimarble okanye iithayile zegranite ngelixa ugcina umthunzi ofanayo kunye neenkozo. Ukongeza, umgangatho wayo wendalo onqabileyo unika i-travertine uninzi lwemingxunya yendalo kumphezulu wayo. Oku kunokubonakala ngathi yinto engeloncedo kwamanye amatye njengoko ubumdaka bunokungena ngaphakathi kule mingxunya, kodwa kwi-travertine, oku kujongeka nje kongeza kumgangatho ophakamileyo we-travertine ebonelela. Ngenxa yoku kujongeka kwendalo, ukuhambisa umkhondo kunokuthathwa njengokukhetha imeko yendalo. I-Travertine ayinyanzelekanga ukuba yenze iinkqubo ezininzi zokuvelisa okanye zokuphinda zisebenze ngaphambi kokuba ibe yimveliso egqityiweyo.
Ngaphambi kokuba ufake i-travertine kwigumbi lakho lokuhlambela, kukho izinto ezithile ezibalulekileyo ekufuneka uziqaphele zokugcina ujonge kwaye unikezela ngononophelo olufanelekileyo kumgangatho wakho. Okokuqala, nangona i-porosity ye-travertine yamkelwe ngokubanzi, kuya kuba bubulumko ukusebenzisa itywina elikhethekileyo okanye imveliso ye-polish kwithayile ngaphambi kofakelo. Ezi pores zinkulu kwaye zinokude ziye kuyo yonke indlela, ke ukukhusela ukungena kunye nokuphuma kwamanzi kunye nezinye izinto kufanele kuthathelwe ingqalelo njengokuvezwa okungapheliyo kunokudala iintanda okanye kubangele iithayile ukuba ziphume kulungelelwaniso lwazo ngenxa yeethayile ezandayo ngenxa yamanzi.
Enye into ebalulekileyo ekufuneka uyiqaphele kukuba i-porosity ye-travertine kunye nokwenziwa kwayo kwe-mineral esebenzayo ngamanye amaxesha kunokubangela ukuchitheka kungcolise ilitye. Umzekelo, iijusi ezineasidi ezinje ngeorenji okanye ilamuni zinokuthi zisabele kwisakhiwo se-travertine sezimbiwa kwaye zibangele ibala elisisigxina. Akufuneki ukuba, ezinye iimveliso zokucoca indlu zinokungahambelani neethayile zangaphantsi zetravertine. Umzekelo, iiarhente zokucoca ezineasidi efanayo neviniga okanye ityuwa akufuneki zisetyenziswe kwiithayile zethrafikhi. Unonophelo kufuneka lwenziwe ekukhetheni imveliso yokucoca engacacanga kwaye ayizukuphendula ngetraine.
Lilonke, i-travertine isekugqibelele okuhle ukuyisebenzisa kuyo nayiphi na indlu, ukuba umnini-khaya unoxanduva ngokwaneleyo lokuhoya eli litye lihle lendalo. Iseyinto enkulu yokuqalisa incoko kunye nemibala eyahlukeneyo kunye nemigca ebunjiweyo. Iindidi zemibala, iimilo zethayile kunye nobukhulu zibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zeshawari yokuhamba kwetravertine ukwenza ifayile ye uyilo oluhle lokuhlambela .
Indawo yokuhlambela yaseMeditera ibonisa iindlela zokungena ezikhokelela kwindawo yokuhlambela. Zimbini iialcoves ezincinci ezikhoyo, iwindow ephezulu kunye nekhefu elikhanyayo kwithayile emhlophe yelitye. Zonke ezinye iishawa zibonisa iithayile zodonga ezinqamlezileyo, imvelaphi elungileyo ekugqityweni kobhedu kweempompo, ishawa yomnxeba, kunye nemvula yeshawari. Umda weetayile ze-travertine, owona mgangatho uphambili womgangatho weshawa unethayile emnyama yamatye njengokuphikisana ne-beige travertine kunye nokukhetha okungashukumiyo.
Le ndlu yangasese yesitayile sobugcisa inesitya esihle seglasi esinefreyimu, ishawa-intloko yentloko, ipateni yomgangatho wetayile kunye nodonga lwangaphakathi. Ezi zinto zimbini zokuhlambela zilambatha zibonisa imiphezulu yeetafile zegranite kunye nekhabhathi enezitye. Ibhafu evaliweyo ihleli ekoneni kwaye inikezela ngeembono zangaphandle.
Olu hlobo lobugcisa kodwa lwesiko Indlu yangasese yokuhlambela ifaka ukugqitywa kwegranite emdaka ngeethayile zayo zomgangatho ezichasene kakuhle nepeyinti ecocekileyo esetyenziselwa iikhabhathi, izilungiso kunye neepaneli eziphakanyisiweyo zommandla webhafu. Ishubhu ibekwe kwindawo enamacala amathandathu, ihonjiswe ngamakhethini angaphezulu nangaphezulu. Indawo yeglasi ebiyelweyo yokuhlamba inethayile erhabaxa yetreyini kwizicucu ezincinci, ngombala ohluka ukusuka kumhlophe ukuya kwi-beige ukuya kumbala omdaka.
Igumbi lokuhlambela elinobunewunewu linendawo yokuhlamba kabini eneempompo zegolide, intloko yeshawa kunye neejetshi zamanzi. Ukuziva okubizayo kweempompo kunikwa imbonakalo yendalo ngakumbi kusetyenziswa iithayile zethrafti emhlophe nebomdaka ezindongeni. Umgangatho, ibhentshi leshawa kunye nokugxininisa eludongeni zikwi-mosaic tile encinci ye-travertine tile efanayo, engqamleze ngombala omdaka wegranite.
Le ndlu yokuhlambela inkulu ine-tile ye-beige travertine tile ejikeleze macala onke, kunye nokusikwa kwesikwere esikhulu kumgangatho kunye nokusikwa okuncinci kweendonga. Isilingi, ucango lwenkuni kunye neefestile eziyimfama zonke zikwimhlophe ecocekileyo, ethi ikhuphe ukutya okuziinkozo kwityhubhu eyakhiwe ngamatye. Amagqabantshintshi ale ndawo yokuhlambela yindawo yeglasi evaliweyo ene-tepe egqityiweyo ye-chrome, kunye neeselfowuni kunye nemvula-efanelekileyo yokusebenzisa ezimbini.
Igumbi lokuhlambela elinobunkunkqele linomthi omhlophe owenziwe ngamatye amhlophe kunye neepaneli eziphakanyisiweyo ezinombala ongaphantsi kweekhabhathi kunye nabadwebi. Phezulu kwezi, isipili esinde sodonga sihlala esithubeni. Igumbi elikhulu libonisa ibhafu ebiyelweyo ngaphakathi okanye i-resin emhlophe ehambelana nesimbo seClassic sempompo yebronze. Ngasemva, iglasi ecwengileyo evaliweyo ivale indawo yokuhlamba kunye neentloko zeeshawari ezifanayo kunye neempompo ezifakwe eludongeni, zikwindawo enye yobhedu egqityiweyo. I-Travertine yayiyeyona tile iphambili yamatye isetyenziselwa udonga lwangasemva lweshawari, kunye nesiseko sebhafu yokuhlambela.
Le ndlu yangasese yanamhlanje inezinto ezimbalwa zesiko ezinje ngomnyango kunye neefestile, ngokuchaseneyo nobuhle basendle obonelelwe ziitayile ze-travertine ezifaka ibhafu kunye nodonga lwendawo yokuhlamba. Njengento yala maxesha, iitepu zebhafu yokuhlambela, ishawa yemvula kunye neshawa yomnxeba konke kugqityiwe nge-chrome. Ngaphandle, ikhawuntari yekhawuntari ibonisa itafile yelitye emhlophe ecwebezelayo kunye neekhabhathi zomthi ezimnyama ezenziwe ngomthi kunye nomzekelo.
Le ndlu yangasese isezantsi ifaka itreyini emdaka etreyini ezindongeni nakwisilingi yendawo yayo yeshawa, exutywe nomdaka omnyama omnyama nomhlophe umbala kwi-wainscoting kunye neeshelfu eziqingqiweyo. Ilitye lomlambo elilula kwisamente lalisetyenziselwa ukutyibilika, kugxininiswa ziiprofayili ezigudileyo zeselfowuni emnyama. Ngaphandle, i-matte emnyama nayo yayisetyenziselwa iitepu zelavatory, ngokuchaseneyo nesimbo sangokuhlwa sokukhanya kwamampunge abekwe ngaphezulu kwesipili.
Le ndlu yangasese yesitayile segcisa iqala ngabadwebi beplanga abashushu kunye neefestile kwinto engento itafile yokuhambahamba . Ukukhokelela kwindawo yeshawari egosogoso, ikhaphethi enkulu yasePersi inxulunyaniswe nelungiselelo le-eclectic: isitulo esinombala opinki, umqamelo obomvu wokuphosa kunye nesityalo esikhulu esinamanzi. Ishawa egobileyo ineempawu zethayile ye-travertine kumgangatho wayo, iindonga kunye nebhentshi leshawa. Iseti entsonkothileyo yeempompo, ishawa kunye neejets zixhonywe eludongeni, nanjengoko imvula yeshawari inyuselwa eluphahleni.
Igumbi elikhulu lokuhlamba linodonga olugobileyo olunxibe iithayile zetrownine ezi-matte. Udonga olwahlukileyo, olubonisa ibhentshi lokuhlambela elisezantsi, lwenziwa kwi-travertine emdaka ngelixa ibhendi yamatye omlambo ohlukaniswe ngobude ziindonga zombini. Ukugqitywa kwelitye lomlambo kukwasetyenziselwa ukutyibilika, kwaye ukugqitywa kwendalo okurhabaxa kuhamba kakuhle xa kugqityiwe ukuvunwa kweediliya kusetyenziselwa ishawa kunye neempompo ezixhonywe eludongeni. Ekupheleni kwegumbi, ucango lweglasi lisebenza njengendawo yokungena kulo mqolomba.
Ishawa enkulu inezinto ezirhabaxa ezindongeni zayo, iphazanyiswa kuphela yimigca emibini yeethayile zemibala eqengqelekileyo ububanzi. I-arched alcove iqoshwe kwikona, ingaphakathi layo lenziwe kwithayile efanayo ye-beige mosaic. Ngalinye icala lale kona kukho ishawa eneedonga kunye neempompo ezenziwe kugqitywe ubhedu ngeoyile.
Le ndlu yeshawari incinci ineendonga zethayile ezinqamlezileyo zikhanyiswe ngefestile encinci. Ibhentshi elincinci kwitayile yesanti ekhaphukhaphu yakhiwe kwikona, ngelixa ukugqitywa ngebronze kugqitywe ioyile kusetyenziselwa ishawa, ishawa, imvula, itawuli yokuloba kunye nodonga.
Igumbi lokuhlambela elibukhali kakhulu libonisa isikwere esikwe erhabaxa setreyini yodonga kwiindonga nakwisilingi, kunye nebhentshi eyakhelwe ecaleni kweshawari. Umgangatho ukwisitayile esikhanyayo somfanekiso ohambelana nethayile enepateni ebaleka kububanzi beendonga zeshawari. Kwelinye ikona, kufakwe iishelfu zomthi ezingunxantathu, kwaye intloko enkulu yeshawari ejikelezayo iba yinto ephambili yale ndlu yangasese.
Le ndawo inkulu yokuhlamba isuka kwindawo yokuhlambela yendalo yesitayile esine-countertop ende ende eneeseti ezintathu zodonga ezixhonywe ngamampunge ezibane zikhanyisa imiphezulu yeetafile zamatye e-emperador. Indawo enkulu yeshawari inqamlezwe ludonga lweglasi kunye neethayile zamatye amhlophe ze-travertine ezindongeni zayo, zahlulwe zodwa ngumbala omnyama obumbala-ukudala ukubonakala okumangalisayo komgama. Imigangatho, kwelinye icala, ibonisa iithayile zangaphantsi ezimnyama ezinombala okhanyayo, zenza umphumo ophantse ube yi-monochrome xa uthelekiswa neendonga kunye neempompo ezimnyama ze-matte, imvula yeefowuni kunye nemvula ebekwe kuphahla olumhlophe.
indawo yokutsha yezitena emhlophe
Le ishawa enkulu yokunethezeka ineetreyini zethrafikhi kwiindonga zayo ezinamacala, kunye neethayile ezithile ezinepateni yesikwere. Umgangatho ukwithayile enombala omdaka ngombala, ekhokelela kwibhentshi yelitye lembombo enamatye amatye angaphezulu. Ishawa yomphunga wobhedu oyile, iimpompo kunye nomqheba womnyango konke kunika eli gumbi lokuhlambela imvakalelo yeediliya, eziqhubeka zigxininiswa ziibhloko zeglasi phezulu kodonga ukukhanyisa indawo yonke.
Le ndlu yokuhlambela yokutyela isebenzisa ukusikwa kwetayile enkulu kwindawo yokuhlambela, iphele embindini apho iindonga zipeyintwe ngombala omhlophe ococekileyo. Ngaphakathi kwishawa, ithoni emnyama isetyenziselwa ukufaka i-mosaic tile isikwere kunye nasemgangathweni, phakathi kwethayile enkulu yokukhanya ye-travertine. I-shaft yesikwere ebekwe eludongeni kunye nesitayile sebhafu yanamhlanje iphakamisa i-Contemporary vibe ngakumbi xa i-counter ye-vanity iphakamisa into engaphezulu kwe-rustic ngeesinki ezifakiweyo kwidrowa yamaplanga kunye neeshelfu.
Le ndlu yokuhlambela ineyona nto intle kangaka ngenxa yophahla oluphezulu, olongezelweyo ngeeringi ngaphezulu kwebhafu kunye nefestile ende efrijiweyo kunye nekhawuntala engelutho ngesipili seglasi esinde ngokulinganayo. Ethandekayo Chandelier yangasese Ukuxhonywa ngaphezulu kwebhafu kunika eli gumbi isibheno esihle.
Kwiziko, irabha ejikeleziweyo enephethini ineqhosha le-beige-upholstered Ottoman. Kuzo zonke iindawo, umthunzi okhanyayo we-travertine tile usetyenziselwa imigangatho kunye nodonga olwakhiweyo, kunye nokugqitywa kwelitye elifanayo elisetyenziselwa i-countertop ye-woodry cabinetry. Ukuxhasa ukugqitywa kwelitye lendalo, yonke indawo yokuhlambela ipeyintwe isitokhwe esimdaka ngombala esicoceke ngombala omhlophe.
Igumbi lokuhlambela laseMeditera linomthi omnyama obunzima kunye neengcango zalo, kunye neepaneli zangaphantsi zokungena. I-countertop yigranite emdaka emdaka, ekwasetyenziselwa iqonga ukuya kwindawo yokutshisela ityhubhu yentsimbi esecaleni ecaleni kweempompo zethusi ezenziwe ngeoyile. Indawo yokuhlambela ifakwe i-diagonally ebekwe ngaphandle kwetayile ye-travertine erhabaxa. Ukusikwa okukhudlwana kusetyenziswa indawo yeglasi evaliweyo yeglasi kwaye iindonga zipeyintwe ngombala omdaka ngombala omnyama ukuze uhambe nombala wendalo we-travertine. Ukuziva ngakumbi kweMeditera, ifeni yokhuni efeni yomthi kunye nokujongwa kwesibane selambu kwongezwa kwiziko nangaphezulu kwebhafu.
Igumbi lokuhlambela lendlu yecottage libonisa indawo encinci ebiyelweyo embindini ukuze isebenze njengendawo yokuhlamba. Idityaniswe ngeglasi, ngaphakathi kukho iimpompo zentsimbi emnyama, ishawa, isiphatho somnyango kunye neehenjisi. Ngaphandle, ukwahlula ubuso be-travertine ilitye lisetyenziselwa ukwakha iintsika ezinemiqadi yeenkuni ezinzima kwinxalenye yayo ephezulu. Ubuso obukrwada obufanayo busetyenziselwa imigangatho, ngelixa ukusika okugudileyo, okukhudlwana kusetyenziswa iindonga. Iingcamango zeshawa zokuhamba ngokudibanisa ilitye kunye neempawu zomthi zinokudala imvakalelo efudumeleyo kwaye zigxininise ukubanjwa yingcibi.
Indawo yokuhlambela yangoku iqala nge-stucco engwevu ejikeleze udonga lwayo nge-travertine ebunjiweyo kubukhulu obahlukeneyo bemigangatho yayo. Ngaphakathi kwiglasi yeshawari ebiyelweyo, kusikwa iitayile ze-travertine ezindongeni ezinentloko yokuhlambela nge-bronze eneoli, iimpompo kunye nesibini seentloko zemvula yokuhlambela.
Ngokwahlukileyo kumbala ogudileyo nengqolowa ye-travertine, isileyiti ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka, omdaka kunye no-orenji kunye nokusikwa kwiziqwenga ezibhityileyo ezixande zafakelwa kudonga lwangaphandle kunye nokwakhelwa kwebhafu emhlophe yokuthambisa. Ndwendwela eli phepha ngaphezulu iibhafu zokuthambisa uya kuthanda.
Imibono yesipho sonyaka wesithathu
Ungalitshintsha njani igama kwikhadi lokhuseleko loluntu emva komtshato
iingoma ezivela kutata ziye kwintombi yakhe
eyona ilokhwe intle ehlabathini
umsesane wokuzibandakanya komnwe obhinqileyo
Ngaba umormoni angatshata nomntu ongeyena umormoni